पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई दैनिकी खर्च धान्न गाह्रो भयो, अब विद्युतीय सवारी चढ्ने बढ्छन्ः ह्वाइट लोटसका प्रबन्ध निर्देशक अशोक खड्की
🕚 २०७८ मंसिर ९ - १५:०९ मा प्रकाशित
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दो क्रममा छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिका कारण आम नागरिक महँगीको मारमा छन् । नेपालमा प्रयाप्त मात्रमा जलविद्युत उत्पादन भएसँगै निर्यात पनि शुरु भइसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युतको खपत बढाउनका लागि पहल गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सकिए विद्युतको खपत पनि बढ्ने निश्चित छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार, कर लगायतमा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । पट्रोलियम सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको भन्सार दर सस्तो छ । यसका बाबजुत विद्युती सवारीको प्रयोग अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र विद्युतको आपूर्ती बढेसँगै इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको बिक्री बढ्ने नेपालका लागि प्योर इभीको आधिकारिक बिक्रेता ह्वाइट लोटस मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक ओशक खड्की बताउँछन् । दुई दशकभन्दा लामो बैंकिङ अनुभवलाई विद्युतीय सवारीको बिक्रीमा उपयोग गरिरहेका खड्कीसँग हाम्रोअर्थका निर्दोष घोरसाइनेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
विकास बैंकको नेतृत्व र वाणिज्य बैंकमा उच्च तहमा काम गरिसक्नु भएको छ । सेवा सुविधा तथा राम्रो तलब आउने जागिर छोडेर अटोमोबिल्स् त्यसमा पनि विद्युतीय सवारीमा किन प्रवेश गर्नु भयो ?
अबको भविष्य भनेको विद्युतीय सवारीे हो । पछिल्लो केही वर्षदेखि संसारभरका उपभोक्ताहरुको आकर्षण विद्युतीय सवारीमा छ । विद्युतीय सवारी चढ्ने उपभोक्ता पनि बढी राख्नु भएको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा विद्युतीय सवारीको सम्भावना उच्च छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्छ भने विद्युत स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ ।
नेपालमा करिब शतप्रतिशत विद्युत नविकरणिय ऊर्जाबाट उत्पादन हुन्छ । साथै, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सरकारले नीतिगत सहयोग गरिरहेको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीको उज्जवल भविष्य देखेर यसमा लागेको हुँ ।
ह्वाइट लोटस मोटर्सले भारतीय ब्राण्ड प्योर इभीका स्कुटर बिक्री गर्दै आइरहेको छ । तर, नेपालमा धेरै कम्पनीहरुले चिनियाँ ब्राण्डका स्कुटर बिक्री गर्नु हुन्छ । प्योर इभीका स्कुटर त्यस्तो के विशेषता छन् ?
दक्षिण एसियका अधिकतम उपभोक्ताको पहिलो सवारी भने २ पांग्रे हुने गर्छ । दुई पांग्रेबाट अन्य सवारीमा सिफ्ट हुने हो । लागतको हिसाबले पनि २ पांग्रेमा प्रवेश गर्न सहज छ । पेट्रोलियम २ पांग्रे सवारीमा तेल, मर्मत सम्भार लगायतको अतिरिक्त खर्च बढी नै छ । नेपाल, भारत, चीनका सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई हेर्दा धेरै उपभोक्ताको पहिलो इलेक्ट्रिक सवारी २ पांग्रे नै हुने गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी बिक्री गर्नु अघि हामीले धेरै अध्ययन गरेका छौं । भारत वा चीनमध्ये कुन मुलुकबाट २ पाग्रे ल्याउने भनेर । हामीले अध्ययन गरेका विभिन्न कम्पनीमध्ये प्योर इभीको स्कुरट उत्कृष्ट देखियो । प्योर इभी भारतको हैदरबादमा आफ्नै उद्योग भएको कम्पनी हो । र, यसका उत्पादन विश्वासिलो र भरपर्दो र्छे । आईआईटी हैदरबादको प्राविधि सहयोगमा स्थापना भएको कम्पनी पनि हो । यो भारतको उत्कृष्ट ३ कम्पनीमध्ये एक हो ।
विद्युतीय सवारीमा कम्पनीको दीर्घकालीन योजना छ । साथै यसको उत्पादन दीगो, बलियो, भरपर्दो हुनुका साथै वारेन्टि सहित उपलब्ध छ । कम्पनीले इलेक्ट्रिक मोटरसाइक पनि कम्पनी सन् २०२२ मार्चमा सार्वजनिक गर्दैछ । त्यो मोटरसाइकल पहिलो दिनमै नेपालमा सार्वजनिक गर्ने छौं । इलेक्ट्रिक सेग्मेन्टमा ३ र ४ पांग्रेमा पनि जाने कम्पनीको योजना छ । यसले पनि प्योर इभी रोज्न मद्दत गर्यो । लङ टर्म पार्टनकोरुपमा प्रिन्सिपल कम्ननीको रुपमा प्योर इभीलाई रोजेका हौं ।
पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दो क्रममा छ । साथै, नेपालमा जलविद्युतको मागको तुलनमा उत्पादन धेरै भएर निर्यात पनि शुरु भइसकेको छ सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट कतिको उत्साहित हुनु हुन्छ ?
विद्युतीय सवारीका लागि अहिले उचित वातावरण निर्माण हुँदैछ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिका कारण नियमित आय स्रोत हुनेलाई खर्च व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । यी कारण पनि विद्युतीय भेहिकलमा चासो बढेको छ । कम्पनीको देशैभरीका डिलरको रिर्पोट हेर्दा उपभोक्ताको चासो र बिक्री बढ्दो क्रममै देखिन्छ । यसबाट हामी उत्साहित छौं । विद्युत उत्पादन बढेर भारतमा निर्यात पनि शुरु भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भारतलाई कम मूल्यमा विद्युत वितरण गरेर नेपाली उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पनि सुन्न आइरहेको छ । स्वदेशमै विद्युतको उपयोग बढाउनेतर्फ पनि सरकार केन्द्रीत छ ।
प्योर इभीका ३ सयभन्दा बढी विद्युतीय स्कुटर उपभोक्ताले प्रयोगगरी सक्नु भएको छ । उहाँबाट पनि सकारात्मक प्रक्रिया प्राप्त भएको छ । पेट्रोल स्कुटर चढ्नु र विद्युतीय स्कुटर चढ्नुमा तत्विक भिन्नता छैन । लागत र पर्फमेन्सको हिसाबले विद्युतीय स्कुटर राम्रो छ । पेट्रोल स्कुटरमा हुने दैनिकी खर्च बचत गर्न सकिन्छ । यो हिसाबले पनि उपभोक्ताहरुले प्योर इभीका स्कुटर मन पराउनु भएको छ । आर्थिक कारणले गर्दा पनि अब धेरै नेपाली विद्युतीय सवारीमा प्रवेश गर्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीय २ पांग्रे बिक्री गर्ने करिब २ दर्जन कम्पनी छन् । तर, गत वर्षको सवारी आयातको तथ्यांकलाई विद्युतीय २ पांग्रेको अवस्था निकै दयनिय छ । यस्तो अवस्थमा विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने कम्पनी बजारमा टिक्न सक्छन् ?
हामीले नेपालमा प्योर इभीका स्कुटर भित्र्याउन अघि १८ महिना अध्ययन गरेका छौं । विद्युतीय सवारीका जानकारहरुसँग छलफल गरेका छौं । सरकारले पनि विद्युती सवारीलाई नीतिगत रुपमा प्रवद्र्धन गरेको छ । सरकारको नीति स्थायी रुपमा रहन्छ कि रहदैन भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । त्यससँगै नेपालमा विद्युतीय सवारी एसेम्बलिङ गर्दा कस्तो रहन्छ र सरकारको नीतिगत सहयोग र प्रावधान कस्तो रहन्छ भनेर अध्ययन गरेर प्योर इभीको बिक्री वितरण शुरु गरेका हौं । गत आर्थिक वर्ष करिब २३ सय वटा विद्युतीय २ पांग्रे आयात भएको छ ।
यसको बिक्री गर्ने कम्पनी करिब २ दर्जनको हाराहारीमा छन् । धेरै आयातकर्ता पटके आयातकर्ता जस्ता पनि देखिन्छन् । केही कम्पनीहरु एक लट विद्युती सवारी आयात गरेको २, ४ महिनामा हराएर जाने पनि हामीले देखेका छौं । त्यसका उहाँहरुको आफ्नै कारणहरु होलान् । प्योर इभी नेपालमा बिक्री शुरु भएको कार्तिक २९ गते एक वर्ष पुरा भएको छ । उक्त अवधिमा ब्राण्ड प्रतिको विश्वास केही हदसम्म कायम गर्न सफल भएका छन् । बुवाले चढेको पेट्रोलियम मोटरसाइकल छोराले पनि त्यही ब्राण्ड पाउँदा निश्चिन्तता छ । हामी पनि सोही अभियानमा छौं ।
त्यसका साथै आर्थिक र प्रदुषणको बाटो पनि छ । पेट्रोलिय सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी चढ्दा व्यक्तिगत खर्च बचत हुनुका साथै मुलुकलाई पनि आर्थिक रुपमा टेवा पुग्छ । पेट्रोलिय पदार्थको आयातमा मुलुकबाट वार्षिक रुपमा खर्बै रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । पछिल्लो समय शिक्षत युवाहरु इलेक्ट्रिक स्कुटरमा सिफ्ट हुनु भइरहेको छ । यसले पनि विद्युतीय सवारीको भविष्य उज्जवल देखिछ ।
एक पटक आयात गरेर हराउने कम्पनीहरु थुप्रै छन् । दीर्घकालीन सेवालाई ध्यान राखेर विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने कम्पनी २, ३ वटा छन् । त्यसमध्ये प्योर इभी पनि एक हो । आयात र बिक्रीको डाटा हेर्दा भारतबाट सोर्सिङ गर्ने कम्पनीमध्ये हामी नम्बर एकमा छौं । नम्बर एकको ताज जोगाउनका लागि पनि अरु प्रोडक्ट थप्दैछौं ।
हजुर आफै भन्नु हुन्छ नेपालमा पटके इलेक्ट्रिक सवारी बिक्री गर्ने कम्पनी धेरै छन् । यसले गर्दा पनि इलेक्ट्रिक सवारी किन्न खोज्ने ग्राहकमा बिक्री पछिको सेवा नपाउने हो कि भन्ने आशंका पनि देखिन्छ । यसले गर्दा पनि अपेक्षित रुपमा इलेक्ट्रिक सवारीको बिक्री बढ्न नसकेको त हैन ?
हामीले अध्ययनको समयमा अनुभव गरेको कुरा पनि यही हो । हामीले इलेक्ट्रिक सवारी चढी रहेका करिब ५० जना व्यक्तिसँग सर्भे गरेका थियौं । उहाँहरु सबैको एउटै गुनासो भनेको हामीले इलेक्ट्रिक सवारी खरिद गर्यो तर आयातकर्ताहरुले आयात बन्द गर्नु भयो । यसले स्पयेर पार्टस्को अभावमा रहरले खरिद गरेको सवारी थन्क्याएर राख्नु परेको छ । तत्कालिन समयमा उहाँहरुलाई पुरानो प्रविधिको लिड एसिड ब्याट्रीको सवारीसाधन दिइएको थियो । हालको बजार लिथियम आयनको छ ।
त्यो समयमा वारेन्टीको सवालमा अहिले खरिद गरियो भोलि बिग्रियो भने बिक्रेताको जिम्मेवारी छैन भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो समयमा पनि इलेक्ट्रिक सवारी प्रतिको मायाले उहाँहरुले खरिद गर्नु भएको थियो । प्योर इभीका स्कुटर आकर्षक हुनुका साथै वारेन्टी पनि छ । प्योर इभीका खरिद गर्ने उपभोक्ताले ब्याट्रीमा ३ वर्षको वारेन्टी पाउनु हुन्छ । साथै कम्पनीका इन्जिनियरहरु हैदरवादबाट तालिम लिएकाहरु हुनु हुन्छ । स्कुटर आयात गरेको पहिलो दिनदेखि नै ठूलो परिणामा स्पेयर पार्टस् आयात गरेर राखेका छौं । कम्पनीको डिलर बन्न अनिवार्य तालिम लिनु पर्छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालबाट डिरलका इन्जिनियर तथा प्राविधिकले तालिम लिएपछि मात्रै लिडरशिपको सम्झौता गर्ने गरेका छौं । साथै डिलरले पनि आवश्यक मात्रमा स्पेयर पार्टस् संचय गरेर राख्नु पर्छ । प्रत्येक डिलरमा पर्याप्त मात्रमा स्पेयर पार्टस उपलब्धताको सुनिश्चित गरेका छौं ।
विगतमा उपभोक्ताले भोग्नु परेको असहज परिस्थित अबको पुस्ताले सामना गर्नु नपरोस् भनेर हर सम्भव प्रयास गरेका छौं । हाल कम्पनीको मुलुकभर १२ वटा डिलरहरु छन् । डिलर लिन चहानेको मात्र धेरै छ । तर हाम्रो काम गर्ने तरिकासँग तरतम्य मिल्नेलाई मात्र डिलर दिइ रहेका छौं । हाम्रो सबै डिलरमा ग्राहकले थ्रीएस (सेल्स, सर्भिस, स्पेयर) सेवा पाउँछन् । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको डिलरकोमा सर्भिस दिन नसक्ने अवस्था आएमा काठमाडौंबाट इन्जिनियरहरुको टिम पठाएर पनि सेवा दिइरहेका छौं ।
बजारमा थुप्रै विद्युतीय २ पांग्रे छन् । ग्राहकले किन प्योर इभी नै रोज्ने ?
बजारमा उपलब्ध विद्युतीय २ पांग्रेमध्येमा सबैभन्दा बढी भ्यलू फर मनीका प्रोडक्ड प्योर इभीसँग छ । प्योर इभीको मूल्य अनुसारको पर्फमेन्सलाई उपभोक्ताले मन पराइ राख्नु भएको छ । विद्युतीय सवारी किन्ने धेरै उपभोक्ता शिक्षित वर्गका हुनु हुन्छ । नियमित आयस्रोतबाट सवारी किन्ने व्यक्ति हुनु हुन्छ । ग्राहकहरु विद्युतीय सवारीको बारेमा इन्टरनेटमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर आउनु हुन्छ ।
कम्पनीको मूख्य शोरुम नक्सालमा आउने उपभोक्ताहरु पनि वरीपरि रहेका ५, ६ वटा विभिन्न ब्राण्डको शोरुम भ्रमण गरेर तुलनात्मक अध्ययन गरेर आउनु हुन्छ । भारतीय ब्राण्ड जसमा ३ वर्षको वारेन्टी भएकाले पनि उपभोक्ता हाम्रो उत्पादनलाई विश्वास गरेर खरिद गर्नु हुन्छ । कम्पनीको मुलुकभर डिलर नेटवर्क छ । सर्भिसका लागि तालिम इन्जिनियरहरुको टिम छ । स्पेयर पार्टस्हरु पनि सरल मूल्यमा उपलब्ध छन् । यी लगायत कारणले धेरै उपभोक्ताहरु प्योर इभीका स्कुटरहरु प्रति आकर्षित हुनु हुन्छ ।
प्योर इभीसँग कति प्रकारका इलेक्ट्रिक स्कुटर छन् ?
प्योर इभीसँग ३ मोडलका इलेक्ट्रिक स्कुटर छन् । ३ वटा मोडलका कारण उपभोक्ताले आफ्नो बजेट अनुसारको सवारीसाधन खरिद गर्ने विकल्प पनि प्राप्त गर्नु भएको छ । इन्ट्रान्स प्लस १ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा नेपालमा दर्ता भएको तथा वारेन्टी उक्त स्कुरट प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ । त्यस्तै २ वटा उच्च गतिका इन्ट्रान्स नियो र इ–प्लोटो ७ जी छ ।
प्योर इभीको भारतमा ८ वटा मोडलका स्कुटर उपलब्ध छ । ती सबै मोडल कम्पनीले नेपाल ल्याएन । हामीले नेपालको बाटोलाई सुहाउँदो, नेपालमा दर्ता हुने, नेपालीको बानी व्यहबारसँग मिल्ने उच्च क्षमताका स्कुटर मात्र ल्यायौं । तल्लो क्षमताका स्कुटर नेपालमा ल्याएनौं ।
एक्सचेञ्जको सुविधा कस्तो छ ?
धेरै उपभोक्ताहरुले पेट्रोलियम सवारीसँग साटेर प्योर इभीका स्कुटर खरिद गर्नु भएको छ । सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तासँग रिभ्यू पनि लिने गरेका छौं । उहाँहरुबाट प्राप्त प्रतिक्रिया राम्रो छ ।
२, ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गर्ने सवारीसाधनको ब्याट्रीमा ३ वर्षका वारेन्टी छ । व्यवहारीका रुपमा प्योर इभीका ब्याट्री ५, ७ वर्षसम्म टिक्छ । पुराना उपभोक्ताले नन् ब्राण्डेड र वारेन्टी नभएको स्कुटर किन्नु भएको थियो । उहाँहरुलाई पनि सहयोग गरिरहेका छौं । हाम्रा कतिपय डिलर तथा सर्भिसमा अनुभवी साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले विगतमा बिक्री गर्नु भएको विद्युतीय स्कुटरहरु स्पेयर पार्टस्को अभावमा थन्किएको थियो । त्यस्ता सवारीमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्योर इभीका स्पेयर पार्टस् बजारमा उपलब्ध गरायौं । प्योर इभीका पार्टस्का कारण थन्किएका विद्युतीय स्कुटर चालु अवस्थामा आएका छन् । हामीले प्योर इभीका सवारीसाधनलाई मात्र नभएर नन् ब्राण्डेड स्कुटरलाई पनि आफ्नो डिलर नेटवर्कमा उपलब्ध सर्भिस दिइरहेका छौं ।
ब्यापार विस्तार गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ । पहिलो चरणमा ३ वटा विद्युतीय स्कुटरबाट शुरु गर्नु भयो । अहिले विद्युतीय साइकल पनि आफ्नो पोर्टफोलियमा थप गर्नु भयो । अब कम्पनीले थप नयाँ के के प्रोडक्ट ल्याउँदै छ ?
हामी विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्ने भनेर बजारमा आएका हौं । अबको भविष्य विद्युतीय सवारीको हो । मलाई पेट्रोलियम सवारी प्रति कुनै पूर्वाग्राह छैन । त्यो हुँदा हुँदै पनि विश्वका ठूला सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीहरु पनि अबको १० देखि १५ वर्षमा विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रीत छन् । यो वृद्धि भइरहेको बजार हो । प्योर इभीका विद्युतीय स्कुटर बिक्री गरि राखेका छौं । गत महिना अटोनिक्स ब्राण्डको इलेक्ट्रिक साइकल बिक्री शुरु गरेका छौं ।
अबको ४ देखि ६ हप्तामा २ ब्राण्डको इलेक्ट्रिक मोपेड सार्वजनिक गर्दै छौं । त्यो मोपेड भनेका इलेक्ट्रिक स्कुटर जस्तै काम गर्छ । त्यसमा प्याडल हुने भएकाले लाइसेन्स आवश्यक नपर्नुका साथै वार्षिक कर तिर्नु पनि तिर्नु पर्दैन । त्यसमा २ वटा मोडल डेलिभरीमा प्रयोग हुन्छन् । डेलिभरी कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरु पाछाडि ब्याक बोकेर अफ्ट्यारो गरी शक्तिशाली मोटरसाइकलहरु प्रयोग गरिराख्नु भइरहेको छ । बढी इन्धन खपत गरेर काम गरिराख्नु भएको छ । हामीले उपलब्ध गराउने डेलिभरी सवारीले उही काम इन्धन खर्च कटौती गरेर लिन सकिन्छ ।
हजुरले डेलिभरी गर्ने इलेक्ट्रिक सवारी बजारमा ल्याउने बताउनु भयो । यसका लागि डेलिभरी कम्पनीसँग टाइअपको योजना बनाउनु भएको छ कि । सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने लक्ष्य छ ?
धेरै डेलिभरी कम्पनीहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । अहिले पनि प्योर इभीका स्कुटरहरु डेलिभरीले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ । प्योर इभीका स्कुटर निजी प्रयोजनका लागि निर्माण भएको सवारी हो । डेलिभरी सवारी पूर्ण रुपमा मेटल बढीले बनेको हुन्छ । व्यावासायीक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्नेका साथै प्रत्येक दिन एक सय किलोमिटरभन्दा बढी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । निजी सवारी लुक्समा ध्यान दिइएको हुन्छ भने व्यावसायीक स्कुटर बलियो गरी निर्माण गरिएको हुन्छ ।
ह्वाइट लोटस मोटर्सले प्योर इभी नेपालमा बिक्री वितरण शुरु गरेको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ। यस अवधिमा कम्पनीको अनुभव कस्तो रहर्यो ?
एक वर्षको अवधि कम्पनीका लागि निकै फलदाय रहर्यो । हामीले मेहनत पूर्वक अनुसन्धान गरेर प्योर इभी नेपालमा बिक्री वितरण शुरु गरेका थियौं । ग्राहकको विश्वास र भरोसाबाट निकै उत्साहित छौं । राज्यको तर्फबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । भन्सार दरको सहुलियत निरन्तर छ । बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा इलेक्ट्रिक सवारीमा वार्षिक कर लाग्दैन । आकर्षण लुक्स र दैनिकी खर्च बचत हुने भएकाले पनि प्योर इभीका उत्पादनबाट ग्राहक सन्तुष्ट हुनु हुन्छ । ग्राहकलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न सकेकाले कम्पनी उत्साहित देखिएको छ ।
अब विद्युतीय सवारी चढ्ने बढ्छन्ः ह्वाइट लोटसका प्रबन्ध निर्देशक अशोक खड्की
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिपछि आयल निगमले देखायो यस्तो फेहेरिस्ता
Previous articleनेपाल बैंकले त्रिविका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बिना धितो १५ लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने
Next article३.२२ अंकले घट्यो नेप्से